Indima yeBhodi Lokuqondisa ngezikhathi zobunzima | Law & More B.V.
Blog » Indima yeBhodi Lokuqondisa ngezikhathi zobunzima
Indima yeBhodi Lokuqondisa ngezikhathi zobunzima
Ngaphezu kwe- i-athikili ejwayelekile kwiBhodi Yokwengamela (ngemuva kwalokhu 'yi-SB'), singathanda futhi ukugxila endimeni ye-SB ngezikhathi zenhlekelele. Ngezikhathi zenhlekelele, ukuvikela ukuqhubeka kwenkampani kubaluleke kakhulu kunakuqala, ukuze kubhekwe okubalulekile. Ikakhulu maqondana nezinqolobane zenkampani kanye nezintshisekelo ezahlukahlukene ze- abathintekayo abathintekayo. Ngabe indima ebaluleke kakhulu ye-SB iyafaneleka noma iyadingeka kuleli cala? Lokhu kubaluleke kakhulu ezimweni zamanje nge-COVID-19, ngoba le nkinga inomthelela omkhulu ekuqhubekeni kwenkampani futhi lena yinhloso okufanele iqinisekiswe yibhodi kanye ne-SB. Kule ndatshana, sichaza ukuthi lokhu kusebenza kanjani ngezikhathi zobunzima ezifana nenkinga yamanje ye-corona. Lokhu kufaka phakathi izikhathi zesimo esibucayi esithinta umphakathi wonkana, kanye nezikhathi ezibucayi zenkampani uqobo (isb. Izinkinga zezezimali nabathathayo).
Umsebenzi osemthethweni weBhodi Eliphethe
Indima ye-SB ye-BV ne-NV ibekwe endimeni 2 yendatshana 2: 140/250 yeDCC. Leli lungiselelo lifundeka kanje: “Indima yebhodi eyengamele uku phatha izinqubomgomo zebhodi labaphathi kanye nezindaba ezijwayelekile zenkampani namabhizinisi ahambisana nayo. Izosiza ibhodi labaphathi ngezeluleko. Ekwenziweni kwemisebenzi yabo, abaqondisi bokuqondisa bazoholwa ngu izintshisekelo zenkampani nebhizinisi esebenzisana nayo. ” Ngaphandle kokugxila okujwayelekile kwabaqondisi bokwengamela (intshisekelo yenkampani kanye nebhizinisi elixhumene nayo), le ndatshana ayisho lutho mayelana nokuthi ukugadwa okuthuthukisiwe kufanelekile yini.
Ukucaciswa okuqhubekayo kwendima ethuthukisiwe ye-SB
Ezincwadini nakumthetho wamacala, kuchaziwe izimo lapho kufanele kusetshenziswe khona ukugadwa. Umsebenzi wokuphatha ikakhulukazi ukhathaza: ukusebenza kwebhodi labaphathi, isu lenkampani, isimo sezezimali, inqubomgomo yobungozi kanye ukulandelwa nomthetho. Ngaphezu kwalokho, izincwadi zihlinzeka ngezimo ezithile ezikhethekile ezingase zivele ngezikhathi zenhlekelele lapho lokho kulawulwa kanye nezeluleko kungaqiniswa, ngokwesibonelo:
Isimo esingesihle sezimali
Ukuhambisana nomthetho omusha wenhlekelele
Ukuguqulwa kwesu (eliyingozi)
Ukungabi bikho lapho kwenzeka ukugula
Kodwa lokhu kuqondiswa okuthuthukisiwe kuhlanganisani? Kuyacaca ukuthi iqhaza le-SB kumele lidlulele ngale kokumisa nje inqubomgomo yabaphathi ngemuva komcimbi. Ukuqapha kuxhumene kakhulu nezeluleko: lapho i-SB yengamela isu lesikhathi eside kanye nohlelo lwenqubomgomo lwabaphathi, ngokushesha kuza ekunikezeni izeluleko. Mayelana nalokhu, indima eqhubeka ngokwengeziwe ibekelwe i-SB, ngoba izeluleko azidingi ukunikezwa kuphela lapho abaphathi bezicela. Ikakhulukazi ngezikhathi zenhlekelele, kubaluleke kakhulu ukuhlala phezulu kwezinto. Lokhu kungabandakanya ukubheka ukuthi ngabe inqubomgomo namasu kuyahambisana yini nesimo samanje sezezimali kanye nesikhathi esizayo kanye nemithetho yezomthetho, kuhlolisiswa ngokucophelela ukufuna ukuhlela kabusha nokunikeza izeluleko ezidingekayo. Ekugcineni, kubalulekile futhi ukusebenzisa ikhampasi yakho yokuziphatha futhi ikakhulukazi ukubona izici zomuntu ngale kwezici zezimali nezingozi. Inqubomgomo yenkampani yezenhlalakahle idlala indima ebalulekile lapha, ngoba hhayi inkampani kuphela kodwa namakhasimende, abasebenzi, ukuncintisana, abahlinzeki futhi mhlawumbe nomphakathi wonke ungathinteka kule nkinga.
Imikhawulo yokubhekwa okuthuthukisiwe
Ngokususelwe kokungenhla, kusobala ukuthi ngezikhathi zobunzima kungalindeleka indima ebaluleke kakhulu ye-SB. Kodwa-ke, yimiphi imikhawulo ephansi futhi ephezulu? Ngemuva kwakho konke, kubalulekile ukuthi i-SB ithathe izinga elifanele lokuzibophezela, kepha ngabe kunomkhawulo kulokhu? Kwangathi i-SB nayo ingaphatha inkampani, ngokwesibonelo, noma ngabe kusekhona ukwehlukaniswa okuqinile kwemisebenzi lapho yibhodi labaphathi kuphela elibhekele ukuphatha inkampani, njengoba kubonakala kwiDutch Civil Code? Lesi sigaba sihlinzeka ngezibonelo zokuthi kufanele izinto zenziwe kanjani futhi zingafanele zenziwe kanjani, ngokuya ngenqubo ethile ngaphambi kwe-Enterprise Chamber.
Ukuze unikeze izibonelo ezithile zokuthi i-SB akufanele isebenze kanjani, sizoqala sisho ezinye izibonelo ezivela kwabaziwayo I-OGEM icala. Leli cala lalithinta inkampani yamandla nokwakhiwa kwezimali, lapho abaninimasheya enkambeni yophenyo babuza i-Enterprise Chamber ukuthi ngabe zikhona yini izizathu zokungabaza ukuphathwa kahle kwenkampani. Lokhu kuqinisekiswe yi-Enterprise Chamber:
“Mayelana nalokhu, i-Enterprise Chamber ithathe njengeqiniso lokuthi ibhodi eyengamele, ngaphandle kwezimpawu ebeziyifinyelele ngezindlela ezahlukahlukene futhi obekufanele ziyinikeze isizathu sokufuna eminye imininingwane, azange zenze sinyathelo kulokhu futhi azange zingenelele. Ngenxa yalokhu kushiywa, ngokusho kwe-Enterprise Chamber, inqubo yokuthatha izinqumo yakwazi ukwenzeka ngaphakathi e-Ogem, okwaholela ekulahlekelweni okukhulu minyaka yonke, okwagcina kube okungenani i-Fl. 200 million, okuyindlela yokwenza ngokunganaki.
Ngalo mbono, i-Enterprise Chamber iveze iqiniso lokuthi maqondana nokwakhiwa kwamaphrojekthi wokwakha ngaphakathi e-Ogem, kwathathwa izinqumo eziningi lapho ibhodi eyengamele i-Ogem ayizange iyifeze noma ayiyifezekisanga kahle indima yayo yokuphatha, ngenkathi lezi zinqumo, ngokubheka ukulahleka okuholelwe yile miklamo yokwakha, zazibaluleke kakhulu ku-Ogem. "
Esinye isibonelo sokungaphathwa ngendlela kwe-SB ngezikhathi zobunzima yi- ULaurus icala. Leli cala lalibandakanya uchungechunge lwesitolo enqubeni yokuhlelwa kabusha ('Operation Greenland') lapho cishe izitolo ezingama-800 zazizosebenza ngaphansi kwefomula eyodwa. Ukuxhaswa kwale nqubo bekungaphandle kakhulu, kepha bekulindeleke ukuthi kuphumelele ngokuthengiswa kwemisebenzi engeyona eyinhloko. Kodwa-ke, lokhu akuhambanga njengoba bekuhleliwe futhi ngenxa yenhlekelele eyodwa emva kwenye, inkampani kwadingeka ithengiswe ngemuva kokuqothuka okubonakalayo. Ngokwe-Enterprise Chamber i-SB bekufanele ngabe ibisebenza kakhulu ngoba bekuwumsebenzi wokuvelela nobungozi. Isibonelo, babeqoke usihlalo webhodi enkulu ngaphandle tekutsengisa isipiliyoni, bekufanele babe nezikhathi zokulawula ezihleliwe zokuqalisa uhlelo lwebhizinisi futhi bekufanele basebenzise ukugadwa okuqinile ngoba bekungekhona nje ukuqhubeka kwenqubomgomo engaguquki.
In the I-Eneco icala, ngakolunye uhlangothi, kwakunolunye uhlobo lokuphathwa budedengu. Lapha, abaninimasheya womphakathi (ababesungule ngokuhlanganyela 'ikomidi lamasheya') babefuna ukuthengisa amasheya abo belindele ukwenziwa kwamasheya. Kube nokuhilizisana phakathi kwekomidi lamasheya ne-SB, naphakathi kwekomidi lamasheya nabaphathi. I-SB ithathe isinqumo sokulamula neKomidi Labaninimasheya ngaphandle kokubonisana neBhodi Yezokuphatha, ngemuva kwalokho bafinyelela esivumelwaneni. Ngenxa yalokhu, kwavela ukungezwani okukhulu ngaphakathi enkampanini, kulokhu phakathi kwe-SB neBhodi Yezokuphatha.
Kulokhu, i-Enterprise Chamber inqume ukuthi okwenziwe yi-SB bekukude kakhulu nemisebenzi yabaphathi. Njengoba isivumelwano sabaninimasheya bakwa-Eneco sathi kufanele kube nokusebenzisana phakathi kwe-SB, iBhodi Yezokuphatha kanye nabaninimasheya ekuthengisweni kwamasheya, i-SB bekungafanele ivunyelwe ukunquma ngalolu daba ngokuzimela.
Ngakho-ke leli cala likhombisa olunye uhlangothi lobubanzi: isihlamba asigcini ngokuthambeka kuphela kepha futhi singaba nokuthatha indima ekhuthele (yokuphatha). Iyiphi indima esebenzayo evumelekile ezimweni zenhlekelele? Lokhu kuxoxwa ngakho kuleli cala elilandelayo.
ITelegraaf Media Groep (ECLI: NL: GHAMS: 2017: 930)
Leli cala liphathelene nokuthengwa kweTelegraaf Media Groep NV (ngemuva kwalokhu 'i-TMG'), inkampani yabezindaba eyaziwayo egxile ezindabeni, ezemidlalo nezokuzijabulisa. Kwakunababili ababengenele ukhetho lokuthatha lesi sikhundla: uTalpa kanye nenhlangano esebenzisana neVPE neMediahuis. Inqubo yokuthatha kabusha yayihamba kancane ngolwazi olunganele. Ibhodi ligxile kakhulu kuTalpa, ebiphikisana nokukhulisa inani lamasheya ngokwakha i- inkundla yokudlala ezingeni. Abaninimasheya bakhala ngalokhu ku-SB, okwadlulisela lezi zikhalazo kwiBhodi Yezokuphatha.
Ekugcineni, ikomidi lezamasu lasungulwa yibhodi nosihlalo weSB ukuze liqhubeke nezinye izingxoxo. Usihlalo ube nevoti lokuvota futhi uthathe isinqumo sokuxoxisana neqembu, ngoba bekungenakwenzeka ukuthi uTalpa abe yiningi labaninimasheya. Ibhodi linqabile ukusayina umthetho olandelwayo wokuhlangana ngakho-ke lachithwa yi-SB. Esikhundleni sebhodi, i-SB isayina umthetho olandelwayo.
UTalpa akavumelananga nomphumela wokuthathwa kwemali futhi waya kwa-Enterprise Chamber eyophenya ngenqubomgomo ye-SB. Ngokombono we-OR, izenzo ze-SB zazifanelekile. Kwakubaluleke kakhulu ukuthi i-consortium kungenzeka ihlale ingumninimasheya iningi ngakho-ke ukukhetha kwakuzwakala. I-Enterprise Chamber ivumile ukuthi i-SB iphelelwe yisineke ngabaphathi. Ukwenqaba kwebhodi ukusayina umthetho olandelwayo wokuhlangana bekungeyona inzuzo yenkampani ngenxa yezinxushunxushu ebezivele eqenjini le-TMG. Ngenxa yokuthi i-SB ibiqhubekile nokuxhumana kahle nabaphathi, ayizange yeqe umsebenzi wayo wokufeza intshisekelo yenkampani.
Ngemuva kokuxoxwa kwaleli cala lokugcina, kungafinyelelwa esiphethweni sokuthi hhayi ibhodi labaphathi kuphela, kepha ne-SB ingadlala indima enqumayo ngezikhathi zobunzima. Yize ungekho umthetho wecala othize kubhubhane lwe-COVID-19, kungaphethwa ngesisekelo sezahlulelo ezibalulwe ngenhla ukuthi i-SB iyadingeka ukuthi ibambe iqhaza elingaphezulu kwendima yokubuyekeza ngokushesha lapho izimo zingaphandle komkhawulo imisebenzi ejwayelekile yebhizinisi (I-OGEM & Laurus). I-SB ingahle ibambe iqhaza elibonakalayo uma izintshisekelo zenkampani zisengozini, inqobo nje uma lokhu kwenziwa ngokubambisana nebhodi labaphathi ngangokunokwenzeka, okulandela ukuqhathanisa phakathi I-Eneco futhi I-TMG.
Ngabe unemibuzo mayelana neqhaza leBhodi labaPhathi ngezikhathi zobunzima? Ngemuva kwalokho sicela uxhumane Law & More. Abameli bethu banamakhono kakhulu emkhakheni wezomthetho wezinkampani futhi bahlala bekulungele ukukusiza.
Thumela Previous Ibhodi Lokuphatha